🥇 ▷ Fiiri halista kugu soo food saari doonta GreedFall ee fiidiyowga cusub ✅
Fiiri halista kugu soo food saari doonta GreedFall ee fiidiyowga cusub
Fiiri qatarta kugu soo food saari doonta GreedFall fiidiyowga cusub. Booqashada ciyaarta oo muujineysa qatarta ka imaan doonta ciyaaryahanka.
Bilaabashada GuushaFall, RPG ee xiga Xayeysiinta ‘Spiders Studio’, waayo PlayStation 4, Xbox One iyo PC. Sebtember 10, Waad sahamin doontaa adduunka cusub waxaadna ku abuuri doontaa aayahaaga adoo bilaabaya nolol khibrad leh si aad uga bogsato cudurka sida xun u waxyeeleynaya wadankaagii hooyo. Ku dhex gal naftaada qaab ciyaarta ‘GreedFall’ oo ku jirta hagaha fiidiyowga ee 14-ka daqiiqo ah adiga oo faallooyinka ka soo baxayaasha horumarinaya.
Waxaad ka arki kartaa xiriirinta soo socota:
Sida ka muuqata fiidiyowga, dabeecadda GreedFall waxay leedahay guryo badan oo yaab leh oo khatar ah, gaar ahaan mugdiga kadib, laakiin waxaa jira hal waddo ka badan oo looga gudbi karo. Tijaabi adoo xulo xirfadahaaga iyo kaladuwanaanta hubka, sixirka, xumaha iyo waxyaabo kaloo badan!
Ku firdhay agagaarka goobo badan oo furan oo ah GreedFall waxaad ka heli doontaa meelo kala duwan oo lagu dego. Iyaga dhexdooda waxaad ka geli kartaa goobta shaqada si aad si qoto dheer u habayn karto qalabkaaga, isweydaarsiga qaybo si aad u badasho muuqaalka iyo tirakoobka qalabkaaga. Xeryaha sidoo kale waa fursad weyn oo ay kula xiriiraan ardayda aad wada dhigtaan oo aad si wanaagsan u barataan. Noloshaadu waxay kuxirantahay taas.
Ujeedo masiirkaaga cinwaan uu soo saaray qarnigii 17aad ee Yurub. Adduun buux dhaafiyey sixirka, hodanka, qarsoonnada iyo hal abuurka cajiibka ah.
GreedFall, Ciyaartii ugu dambeysay ee RPG-ga ee ka socota istuudiyaha ‘Spiders’, waxay kugu martiqaadeysaa inaad ka abuurto masiirkaaga jasiiradda aan weli qarxin ee Teer Fradee, marka ciyaarta la sii daayo Sebtember 10, 2019 ee PlayStation 4, Xbox One iyo qaab PC ah. Gali khibrad door-ciyaar ah oo go’aansado masiirka adduun cusub oo buux dhaafiyo sixirka, taajirnimada, siraha lumay iyo hal abuurka cajiibka ah. Qayb ka noqo nolosha nool iyo isbedelka adduunka iyada oo loo marayo diblomaasiyadda, khiyaanada iyo xoogga: wax ka beddel jidka taariikhda oo dooro masiirkaaga.
Waqtigii Old World wuu soo gabagabeynayaa. Qaaradda waxaay wasakhaysay, oo ay dad badani ku diirsadeen isla markaana ay ku waxyeeloobeen cudur dilaa ah oo aan laga bogsan karin. Kuwii dhex degganaa waxay u dhinteen rajo la’aan.
Laakiin se waxaa jira rajo yar oo rajo beel ah: Waxay soo heleen jasiirad fog, oo fog iyo meel qarsoon. Teer Fradee… Waa dhul ka nabad ah cudurka beenta ee malichor, oo ah meel ay ka buuxaan nolosha iyo dabiicadda duurjoogta ah oo ka fog gacanta dadka. Jasiiraddu waxay balanqaadeysaa hodan, laakiin waxay sidoo kale matalaysaa rajada kaliya ee bini-aadamka la helo si loo helo dawaynta malichor. Inta lagu jiro raadinta dawada, baar adduunka cusub jasiiraddan qarsoon ee buux dhaafi doonta sixirka dadka daganayaal ah, kuwa calooshood u shaqeystayaasha ah iyo kuwa ugaarsada.
Baro La Isla – Dunida GreedFall iyo aqoonsigeeda aragtida ayaa inta badan saldhig u ah qarnigii 17aad ee Yurub. Dhismaha, dharka, hubka iyo bay’ada waxaa saameyn ku leh xilligan taariikhiga ah ee ay ku badan yihiin sahaminta, daahfurista sayniska iyo dhaqan ballaarin buuxda. Si kastaba ha noqotee, adduunkani boqolkiiba boqol macquul maaha. Waxaad sahamin doontaa jasiirad aad u weyn oo buux dhaafaysa sixirka gees kasta. Dhulkan, oo ay ku nool yihiin xayawaan sixir iyo xayawaan cajiib ah, waxay qariyaan qarsoodiyo tira badan iyo waxyaalaha qarsoon ee sugaya in la ogaado.
Go aan ka gaadho aayahaaga – GreedFall waa ciyaar RPG ah oo bixisa xornimo aad u weyn, labadaba horumarka protagonist-ka iyo habka aad u sahamiso adduunka. Xulo galmo dabeecadeedkaaga, ku wanaajiso muuqaalkeeda, xulo astaamo bilow ah iyo, halkaa ka samee, samee qaabkaaga ciyaarta. Nidaamka horusocodka classless wuxuu kuu oggolaanayaa inaad isku daydo ikhtiyaarro kala duwan oo geed xirfadeed ballaaran, iyo sidoo kale isku dar sida aad rabto. Ku nool khibrad shaqsiyadeed oo leh in kabadan boqol xirfadood oo aad ka xulan karto iyo kumanaan kun oo iskudarka kooxda ah.
Dunida cusub – U sii hormari ciyaarta iyo hawlgallada dhameystiran siyaabo badan oo kala duwan, laga bilaabo dagaalka iyo diblomaasiyadda, ilaa khiyaanada. Qaabka aad ku gaadho himilooyinkaaga waxay kuxiran tahay oo keliya go’aamadaada iyo sida aad u dooratay inaad u horumariso dabeecaddaada. Jasiiradda GreedFall waa nolol nool oo si joogto ah isu beddelaysa. Ficiladaada ayaa saameyn doona oo wax ka beddeli doona taariikhda taariikhda.
Saaxiibo samee ama khiyaaneeyo – GreedFall, dhibaatooyinka oo dhan laguma xallin xoog. Farsamayntaada iyo tan saaxiibbadaaguba waxay muhiim u yihiin xirfaddaada seefta, iyo dibloomaasiyadda, istudhaca, sayniska ama xirfad si wanaagsan loo adeegsado waxay meesha ka saari kartaa baahida dagaalka. Dunida ‘GreedFall’ waxaa ku nool kooxo badan, oo mid walbaa leh aaminaad, dhulal, yoolal, xulafooyin iyo cadow. Waa inaad abuurtaa oo jabisaa isbahaysiyada si aad ugu gudubto nidaamka sumcadda qallafsan. Dhamaan go’aamada aad gaadho waad ka raali gelin kartaa ama necbaci kartaa mid ka mid ah kooxdan iyo madaxdooda, iyo sidoo kale asxaabtaada. Awoodaada aad kula tacaali karto iskudhafyada diblomaasiyadeed, labada xubnood ee kooxda aad go’aansatay inaad ku qaadato, iyo sidoo kale dhinaca aad dooratay inaad la dagaallanto ama cidda aad go’aansato inaad gacan ka geysato waxay saameyn ku yeelan doonaan muuqaalka juquraafi ahaan jasiiradda.
Qaybta cajiibka ah ee muuqaalka ah ee dhiiri gelinta.
Ciyaarta ayaa taageerta Tikniyoolajiyadda HDR (xaddiga firfircoon oo sarreeya) iyo xalka 4K on PlayStation®4 Pro iyo Xbox One X. Teknolojiyadda HDR waxaa keliya oo loo heli karaa ikhtiyaar u ah PlayStation®4 iyo Xbox One X.
Xoriyadda iyo kartida ciyaartoygu doortaan ayaa asaas u ah gudaha GreedFall, maadaama go’aamadaagu ay aasaasidoonaan saaxiibtinnimo, jabin doonaan xulufooyin, kala diri doonaan khilaafaadka isla markaana qaabeeyaan jasiiradda mustaqbalka. Markaad sahamineyso dhul hor leh oo adag, raadintaada waxyaabaha qarsoon waxay kuxiran doontaa wax ka badan awoodaada dagaalka.
Abuur dabeecadaada oo dooro xirfadahaaga bilow, sifooyinkaaga iyo hibadaada. Tani kaliya waa bilowga markay tahay been abuurista wadadaada ee Teer Fradee, ama inaad doorato inaad takhasus u sameyso ama aad isku daydo inaad noqoto SUV. Intaa waxaa sii dheer, nidaamka abuurista faahfaahsan ayaa kuu oggolaanaya inaad qalabaynaysid qalabka, la qabsato muuqaalkiisa iyo tirakoobyada si ay ugu haboonaato qaabkaaga ciyaarta.
Dariiqaaga la dagaallama habkaaga: ka adkaada cadawga hubka culus, u isticmaal rapier-kaaga inaad joojiso kana jawaab celiso qaab ama xakameyso goobta dagaalka adoo adeegsanaya dabinno iyo sixir.
Liiska xulashada tab taatikada ee ikhtiyaariga ah Waxay kuu oggolaaneysaa inaad xulato dhaqdhaqaaqaaga xiga si istiraatiiji ah. Xubnaha kooxdaadu way kugu soo raaci doonaan dagaalka, laakiin maskaxda ku hay inay yihiin dad leh rajooyinkooda, ujeeddooyinkooda iyo dhiiri gelintooda. Dhahdo ama samee waxkastoo qaldan oo daacadnimadaada ku jirto way kharribi kartaa xitaa gabi ahaanba way kaa soo horjeedaa.
Gali khibrad door-ciyaar: Hawlaha iyo ujeeddooyinka oo dhameystiran siyaabo kala duwan, sida dagaalka, dibloomaasiyadda, khiyaanada ama cayda.
Xoriyad buuxda ee isbedelka dabeecadda: U ciyaar sidii nin ama naag, waxaad u habeysaa muuqaalkaaga oo dooro hibada, kartida iyo awooda aad rabto.
Weydiiso adduunka sixirka aan qarsoodiga lahayn: Bilow nolol wanaagsan oo aad ku ogaatid siraha qadiimka ah ee ay ilaalinayaan xayawaannada ka sarreeya, muujinta sixirka adduunka ee jasiiradda.
Kuwa keydka ciyaarta, dukaamada silsilada ku xiran kor u qaadista, waxay awoodi doonaan inay helaan set-ka la soo dejin karo “Xaraashka Geelle”, Kaas oo ka kooban a Qalabka Internetka kaas oo la sheegay inuu u keeno nasiib wanaag kii qaada,, Raadiyaha Alchemist kaas oo geedkiisu gubto markii la gubo Duulista Duurjoogta Duurjoogta ah Sawirradiisu waa ka badan tahay mid ku filan in lagu joojiyo duqaynta duurka.
Qaababka: PS4 / Xbox One
Soo saare: Caarada
Tifatiraha: Diirada Guriga Dhexgalka ah
Luqad: Buug-gacmeedka iyo Qoraallada Isbaanishka
Furitanka: Sebtember 10, 2019
PVPr: € 49.99 (Daabacaadda iyo daabacaadda xaddidan)
Bogga Rasmiga ah: http://www.greedfall.com/es
GreedFall ayaa bilaabi doonta Sebtember, 10aad on PlayStation 4, Xbox One iyo PC. Ololihii hore ee ballansashada ayaa horeyba uga socday bakhaarada silsiladaha ku xiran dhiirrigelinta. Wixii macluumaad dheeri ah booqo www.greedfall.com.